SUURTOGAL MA TAHAY INAY BARAFOOBAAN JIILAALKA XILLIGA JIILAALKA: SIDA LOO XAKAMEEYO XIDIDADA CUSUB EE GURIGA, CUNTADA - WIXII MARTIDA
Suurtogal ma tahay in la xakameeyo xididada jiilaalka ee guriga: dhammaan wixii ku saabsan kaydinta saxda ah
Xilliga jiilaalka, maqnaanshaha khudradda iyo miraha cusub miiska ayaa si gaar ah loo ogaan karaa. Hawsha kaydinta kaydka kaydka waxay ku xiran tahay siyaabo kala duwan. In dhalooyinka pickled yaanyada iyo qajaarka, ka sameeyaan macaanka ka soo berry iyo miraha, karootada barafka iyo cagaarka, boqoshaada cusbo cusbo.
Mid ka mid ah alaabooyinka ugu faa'iido leh oo badanaa loo isticmaalo ee jikadeena waa xayawaan, maxaa yeelay waxa ku jira fiitamiin iyo macdano badan, oo jirkeenu ka maqan yahay jiilaalka.
Hadday suurtogal tahay in la qaboojiyo xididada jiilaalka, sida ku haboon waa iyo haddii ay lagama maarmaan tahay in la diyaariyo khudradda ka hor tan ku jirta qodobkan.
Suurtogal ma tahay in la qaboojiyo xididdo jiilaalka?
Inkasta oo xididdo la kaydin karaa muddo dheer iyo guul leh Maqsin, on balakoonka ama kaliya qaboojiyaha cusub, Beeraha lagu xakamaynayo guriga ma aha oo keliya laakiin waa lagama maarmaan. Isla markaasna, waa inaadan walwal gelin in isla markaa ay waayi doonto dhamaan walxaha waxtarka leh.
Waxa ugu muhiimsan waa in si sax ah loo diyaariyo khudradda. Wax yar maaha muhiimadda nadiifinta saxda ah ee sariiraha. Ka akhri waxyaabaha ku jira maqaallo gooni ah, sidaas awgeedna waxaan kuu sheegi doonnaa waxa qawaaniinta qaboojiyeyaasha lagu yareeyo.
Sida loo dhigo xididada jiilaalka xilliga qaboobaha: shuruucda!
Xididyada la qaboojiyay ee qaboobaha waxaa la samayn karaa labadaba ceeriin iyo la kariyey.
Qodobbada Muhiimka ah ee Aqoonta:
Way ka fiican tahay in la qaboojiyo xididada qaybo yaryar, kuwaas oo inta badan looga baahan yahay diyaarinta borscht, vinaigrette iyo suxuunta kale.
Kontaynarada waxaa loo isticmaali karaa qaybinta
Marka dib-u-barafoobay, xididdo lumiso dhammaan hantidooda faa'iido leh.
Markaad si buuxda u qaboojiso, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho "Quick freeze", haddii ay jirto mid.
Hawlaha qaboojiyaha degdega ah waxay qaboojiyaan cuntada -18 darajo Celsius. Haddii aysan jirin wax sidan oo kale ah, markaa xididada waa in la qaboojiyaa -10 ilaa -14 darajo Celsius. Kala duwanaanshahan waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fiican.
Khudaarta cagaaran waxaa lagu keydin karaa 8 bilood.
Waxaad u baahan tahay inaad karkariso dhammaan xayawaanka aan la loodin karin, si aad u ilaaliso midabka iyo dhadhanka.
Haddii aad rabto inaad ku keydiso geedo cayriin ah oo kaydka ah, si fiican u raaci tuubada iyo diirka gebi ahaanba.
Wixii qallajinaya waxay u fiicantahay in la isticmaalo noocyada miiska. Xaaladdan oo kale, khudradda waa inay ahaato mid da 'yar oo cusub.
Khudaarta cagaaran ee yaryar iyo casiirkuba waxay ku habboon yihiin barafka.
Barafku waa hab weyn oo lagu keydiyo ma aha oo kaliya xididdo, laakiin sidoo kale khudrado kale oo badan. Akhri faahfaahinta sida faahfaahinta sida loo xiirto bocorka, bocorka, tufaaxa, basbaaska qadhaadh, basbaas buluug, zucchini, kaabajka cad, sprouts Brussels, basasha, toon.
Dhaqdhaqaaqa si fiican u dhaq.
Iska yaree mindi ama weel.
Xaraashyada cusub ayaa la jarjarayaa
Ku dheji qaybo yaryar oo ku jira weelka ama bacaha.
Ku rid qaboojiyaha oo soo jeeso "Function Quick Quick".
Xididyada barafaysan ee xirmada
Xididdo la kariyey:
Ha diirin oo gooyin xididka, kariyo.
Ku shub biyo qabow iyo diirka.
Karkari oo nadiifi galaaska
Qabow hoos u dhig.
Iska yaree ama jeexi.
U diyaari qaybaha weelasha qaboojiyaha.
Ballaarada bacaha barafeeyaha
Waa midka ugu haboon in la isku xoqo qaybo ka mid ah xididada si ay u qaboojiso bacaha, iyaga oo horay u sameynaaya una sameynaaya guri. Xaaladdan, waxaad xakameyn kartaa qaybo kala duwan, kaas oo kaydiya meel.
Sidoo kale akhri waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan kaydinta xayawaanka la kariyey, oo ku saabsan sida si habboon loo qalajiyo loona qallajiyo khudradan.
Khudaarta iyo miraha si fiican ayaa loo kaydin karaa maaha oo keliya isticmaalka dhaxan. Waxaan idiin diyaarsaney waxyaabo dhowr ah oo ku saabsan sida loo keydiyo khudaarta, miraha iyo nooca kala duwan. Akhri dhammaan wixii ku saabsan keydinta geedka, jeeriga, isteroberi, zucchini, kaabajka, basasha, dabacasaha, basbaaska, bocorka, toonta, jimicsi, tufaax.
Beetjo loogu talagalay burscht.
Beerka loogu talagalay borscht waxay u baahan yihiin inay karkariyaan oo ku dubaan on hayso, aan dhab ahayn. Qeyb ka mid ah, u dhig sida ugu badan ee lagama maarmaanka u ah isu-darka laftiisa. Ka hor inta aanad karin karin, uma baahnid in la dhalaaliyo, laakiin markiiba waxaad ku ridi kartaa biyo kulul.
Beetroot for borscht tinder on khudaar aan dhab ahayn
Beetroot for vinaigrette.
Wixii diyaarinta vinaigrette waxay u baahan tahay mar hore la kariyey xididdo la kariyey, jarjar xabadaha. Ka hor intaa ku daray, waa in la jarjaro heerkulka qolka si aysan u luminin midabkiisa iyo dhadhankiisa.
Ha isticmaalin defrost degdeg ah! Taabashadu waxay noqotaa mid aan macquul aheyn oo la daboolo, sababtoo ah Beetka ayaa lumisa dhamaan faa'iidooyinka iyo dhadhanka dhadhanka.
Beetroot oo lagu gooyo minjiga
Xayawaanka oo dhan barafoobay.
Si aad u dhan dabocase labada siyaabood ee lagu keydsho doonaa. Qayb kasta oo dabocad leh waa in la dhigaa bac gaar ah oo ku rid qaboojiyaha. Ka hor inta isticmaalka, xididdo sida waa in la dhalaaliyaa, sababtoo ah barafku waa la gooyaa ama lama daadin karin.
Barafku wuxuu si toos ah ugu jiri doonaa gudaha dabocase oo dhan, Sidaa darteed, waa suurtagal in la isticmaalo xididdo sida quruxsan oo adeeg iyo gooyo.
Labada kulul ee la kariyey iyo kuwa cows ah waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo kahor intaan la qaboojin.
Waxaa la og yahay in dufanka dabocase ku jira qaybo badan oo waxtar leh, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in lagu qaboojiyo jiilaalka.
Iskuduwaha loogu talagalay barafka dhalada:
Si fiican u raaci biyo biyo ah oo dooro caleemo casiir leh oo wanaagsan.
Dooro caleemo wanaagsan oo biyo raaci.
Si aad u qallajiso
Iska yaree qaybo yaryar.
Iska yaree dushooda qaybo yaryar.
U diyaari qaybaha.
Diyaarso baakooyinka oo ku soo dir khadka
Qalabeynta wadajirka ah ee xididdo iyo karootada
Nidaamyada xididdo iyo karootada lagu yareeyo gebi ahaan waa isku mid.taas oo kuu ogolaaneysa inaad sameyso isku-dhafan isku-dhafan ee labadan khudaar. Qaybtan waxaa loo isticmaali karaa diyaarinta borscht.
Khudaarta ayaa sidoo kale u baahan in la dhaqo, diiray oo la jarjarey. Ka dibna isku dar oo ku rid weelasha caagagga. ama xirmo.
Beetada leh dabacasaha lagu keydiyo
Fiidiyowga waxaad sidoo kale akhrin kartaa talooyinka ku saabsan barafka iyo karootada isku xidhaya:
Ka sokow barafowga heerka caadiga ah ee xididdo, waxaa jira cuntooyin kale: baraf ah ee xididdo la shiilay iyo karootada, diyaarinta barafaysan ee borsch, cocktail khudradda, zazharka khudradda barafaysan, iwm
Beerku waxay noqon kartaa mid ammaan ah oo la isku daro khudaarta kale waxayna abuurayaan cunnooyinka cuntooyinka gaarka ah.
Cunnooyinka for xididdo cusub iyo karootada:
Karootada la dhaqay iyo xididdo, mayr iyo diirka.
Ku dhaq oo nadiifi khudaarta
Canaan iyo qaso khudaarta labadaba.
Isku dariddu waxay u qaybsantahay qaybo.
Ku rid weelasha diyaarka ah ama baakooyinka.
U dir halka qaboojiyaha.
Cunto kariska qudaarta ah:
Peel yar basal oo jarjar.
Ku dhaq dabacasaha iyo xididdo, diirka iyo jarjar.
Waxaad shiishaa basasha saliid gabbaldayaha.
Ku dar xididdo iyo karootada, yareeyso kuleylka iyo kari ilaa ilaa si buuxda loo kariyo.
Ku dar walxaha ku rid shukumaanka si aad u nuugo saliid xad dhaaf ah oo u ogolow inay qaboojiso.
Ku rid shimbiraha weelka oo ku kaydi qaboojiyaha.
Qayb ahaan waxaa la dhigaa qaboojiyaha
Cunto khudradda qudaarta ah:
Waxay qaadan doontaa: xididdo, karootada, basbaaska casaanka cas iyo cagaaran, yaanyada, boqoshaada.
Xingeyska iyo karootada biyo raaci, diirka oo jarjar xabadaha.
Madaarka, boqoshaada iyo yaanyada dhaqday oo jaray.
Dhamaan khudaarta oo qalalan.
Cuntada si gooni ah u xoqdo.
Isku qaso qiyaasta saxda ah iyo kaydi qaboojiyaha qaboojiyaha.
Isku darka qudaarta ee lagu keydsho wuxuu noqon karaa mid kasta
Khudaarta cagaaran waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud. ilaaliso faa'iidada cusub ee soo saarida. Waa mid aad u fudud oo ku habboon in xitaa xaflad hostice ah ay qaban karto.
Waxaan sidoo kale kuugu soo bandhigi doonaa fiidiyo ku saabsan sida loo xiirto xididada jiilaalka ee guriga: